Dad badan oo ka shaqeeya dugsiyada American. Waxaa jira shaqaalaha dugsiga ahayn macalimiinta oo halkaas u joogaan inay caawiyaan ilmahaaga. Baro qaar ka mid ah dadka aad la kulmi doonaa dugsiga ilmahaaga.
Shaqaalaha dugsiga waa kuwa ku shaqeeyaan dugsiga a. Waxaa jira shaqaalaha wax ku barayay, oo waxaa jira shaqaale kale oo aan macallin ahayn, aad. Dhammaan xubnaha shaqaalaha dugsiga sameeyo shaqooyin muhiim u ah waxbarashada ilmahaaga.
Macallimiinta ayaa dadka si toos ah masuul ka ah waxbarista ardayda. Waxay hogaanka hawlaha waxbarashada ee fasallada. Macalimiintu waxay ardayda ka yar baro mawduucyo badan. Ardayda ka weyn, waxaa jira macalimiin maado kasta. In Maraykanka, qoysaska muujiyaan ixtiraam macalimiinta by macalimiinta ka shaqeeya si loo baro oo taageeraan caruurta. Macalimiintu waxay la kulmaan qoysaska dhowr jeer sanadkiiba in ay ka hadlaan ardayda. Tani waa caadi oo macnaheedu ma aha in ay jiraan wax dhibaato ah oo ilmahaaga.
ESL waxay u taagan tahay luqadda Ingiriiska luqadda labaad. Dugsiyada qaarkood waxay leeyihiin macalimiinta ESL si ay u caawiyaan carruurta cusub kuwaas oo baranaya in ay ku hadlaan Ingiriisi. macallimiinta ESL sida caadiga ah waxay leeyihiin fasalo gaar ah dhawr jeer toddobaadkii kaliya talagalay ardeyda af Ingiriisiga. Ama macallimiinta ESL mararka qaar soo galay fasallada caadiga ah iyo waxaa ka gargaara barashada Ingiriisida. Like macalimiinta kale, macallimiinta ESL hadli doona wax ku saabsan waxbarashada cunugaada.
In badan oo dugsiyada, aides caawiyaan macalimiinta fasalada ay. fasalada qaarkood waxay leeyihiin aides badan iyo qaar ka mid ah waxay leeyihiin ma jiro, ku xiran tahay baahida ardayda fasalka gudahood. Kalkaaliyeyaasha inta badan ka caawin ardayga qaba baahida khaaska ah. Kalkaaliyeyaasha sidoo kale kaa caawin kooxo yar yar oo ardayda buuxiso shaqadooda. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in ay ilmahaaga ku caawin in ay bartaan Ingiriisi, sida macallinka ESL-ka.
Maamulaha waa maamulaha madaxa dugsiga ka. Maamulaha wuxuu mas'uul ka yahay kormeerka dhammaan macallimiinta in dhismaha dugsiga. maamulaha waa hogaamiyaha macallimiinta. Maamulaha ma baraan ardayda. halkii, maamulaha caawisaa macallimiinta, ka caawisaa anshaxa, iyo keenaysaa dugsiga. In dugsiyada weyn, sidoo kale waxaa jira maamulayaasha xigeenka. maamulayaasha xigeenka caawin maamulaha. In Maraykanka, haddii waalidku uu leeyahay dhibaato macallin, waalidka inta badan ka hadlayaa maamulaha.
La taliyayaasha dugsiyada ayaa ka caawin waxbarasho ee ardayda, shakhsiyeed, bulshada, iyo baahiyaha horumarineed ee mustaqbalkiisa. La taliyayaasha dugsiyada keeni barnaamijyo lagu caawiyo ardayda dugsiga ku guulaystaan. Taliyeyaasha noqon karaa mid aad waxtar u leh qoysaska qaxootiga. Taliyayaasha waxay kaa caawini kartaa in ardayga la qabsato dugsiga cusub. Taliyeyaasha ogaadaan oo ku saabsan barnaamijyo gaar ah loogu tala galay ardayda qaxootiga. Taliyeyaasha mararka qaar sidoo kale kaa caawin leh caafimaadka maskaxda iyo jirka. lataliyaha waa qof wanaagsan inaad la hadasho dugsiga haddii aad u malaynayso in laga yaabo in ardayga u baahan tahay caawimo dheeraad ah.
Kalkaaliyayaasha shaqeeyaan dugsiyada si ay ardaydu u caafimaad iyo badbaado. Haddii ardayga waa dareen buka, laga yaabaa in macalinka u soo dir kalkaalisada. Haddii uu ardaygu jiran yahay, kalkaalisada go'aansado inuu u diro guriga ilaa uu kasoo raynayo. In Maraykanka, daryeelka caafimaadka maskaxda ardayda waa qayb muhiim ah oo u socda dugsiga. Mararka qaarkood, ardayda ay ku adag tahay in fasalka maxaa yeelay, iyagu haysta waqti adag la qabsado nolosha USA. laga yaabaa in ay u baahan yihiin caawimo dheeraad ah, sababtoo ah in ay soo socda USA ka dal oo kala duwan waa mid aad u adag. Kalkaaliyayaasha caawin kara ardayda taageerada kuwaas oo ku adag tahay hagaajinta haysato.
xoghayaha dugsiga wuxuu ka caawiyaa maamulaha iyo inta badan ka shaqeeya xafiiska hore ee dhismaha dugsiga. Mararka qaarkood xoghayayaasha waxaa lagu magacaabaa shaqaalaha xafiiska hore. Markaad u timaadaan inaad dugsiga ilmahaaga, laga yaabaa in aad u baahan tahay inay la soo wareegto warqad si aad u hubiso in. Tani waxay ka caawisaa ee dhowrayay nabadda ardayda. Xoghayaha kaa caawin doona inaad saxiixdo in. Xoghayaha ayaa ku tusi kara meel ay aadaan. Haddii aad u baahan tahay caawimaad saxiixa ilaa dugsiga, xoghayaha caawisaa. Dugsiyada qaarkood waxay aad u baahan tahay inay la soo wareegto waraaq ah si aad ilmahaaga guriga dugsiga hore ay qaadato. Xoghayaha kaa caawin doona inaad ilmahaaga ka soo saxiixo. Tani waa in ilmahaagu ammaan. Waxay kaliya guriga u tegi kartaa qof aad ku kalsoon tahay.
kormeeraha keenaysaa maamulayaasha iyo dugsiyo badan. Kormeerayaasha Guud go'aan siyaasadda, manhajka (waxa ardayda ku bartaan fasalada), iyo xeerarka degmada. Maxaa yeelay, kormeerayaasha shaqeeyaan dugsiyo badan, iyagu ma waxaa laga yaabaa in dhismaha dugsiga la mid ah sida ilmahaaga.
dugsiyada dadweynaha ee USA
Sharciga Waxbarashada iyo xuquuqda